पक्की पुलमाथिबाट बग्छ खोला ! - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ पक्की पुलमाथिबाट बग्छ खोला !
Sindhu Khabar बुधबार, २०७८ भदौ ३० / १५:०३
हेलम्बु गाउँपालिका–७ मांहाकालका महेन्द्र पण्डितलाई विद्यालय छुट्टी हुनासाथ घर पुग्न हतारो हुन्छ । स्थानीय भूमेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् महेन्द्र प्रायः विद्यालय ओहोरदोहोर गर्दा गाउँका दाई दिदी खोज्छन्– कारण दैनिक दुई पटक पार गर्नुपर्ने गोरेखोलाको पक्की पुलमाथिबाट खोला बग्ने गरेको छ । जसले आउजाउमा समस्या निम्त्याएको छ ।
यही पुल पार गर्दै उनी दिनहुँ विद्यालय पुग्छन् र फर्कन्छन् । ‘बर्खामासको ठाडो खोला तर्न निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले अरु कसैको साथ लिएर तर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एक्लै तर्क खोलाले बगाउला जस्तो हुन्छ, त्यही भएर अरुको सहायता चाहिन्छ ।’
बाढी आउँदा यो खोला झनै ठूलो हुन्छ । पार गर्न सकिँदैन । ‘बाढी आउँदा खोला बढेपछि एक घण्टा भन्दा बढीको बाटो घुम्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय आउन अर्काे बाटो नहुँदा समस्या छ ।’
पुल माथिबाट खोला बगेपछि विद्यालय आउने÷जाने विद्यार्थी मात्रै हैनन्। स्थानीयले पनि सकस भोगिरहेका छन् । गोरे खोलाको पुलमाथिबाट खोला बग्न थालेपछि यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको हो ।
असार १ र साउन १७ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढिको लेदो सहित छालले गोरे खोला तर्ने पुल पुरेर खोला बग्न थालेको थियो । पानीले परिएकाले पुलको सहत देख्न सकिँदैन । पुल वरिपरीको ठण्डिले नै यो पुल हो भन्ने संकेत गर्दछ ।
वर्षासँगै खोलामा पानीको बहाव बढेपछि समस्या भएको हो । गाउँपालिकाले भ्याकुम लगायर बालुवा खोतलेमात्र पनि पुल भन्दा तलबाट खोला बग्ने र सहज हुने स्थानीय बताउछन् ।
चनौटेको रातो पुल बगाएपछि मांहाकाल हुदै हेलम्बुको १, २ र ७ नम्बर पुग्न गोरे खोला बाहेक अर्को विकल्प छैन । पुलमाथिबाट गोरे खोला बग्दा विद्यार्थी देखि पैदल हिड्नेहरु जुत्ता चप्पल खोलेर हिड्छन् । पुलको अवस्था के छ भन्नेबारे अनविज्ञ हुँदा सवारी साधनलाईसमेत समस्या परिरहेको छ । ‘कतै खाल्डा छ कि भन्ने भयले सवारी चलाउनुपर्छ,’ स्थानीय ठाउँमा बोलेरो चलाएर जिविकोपार्जन गरिरहेका सवारी चालक मिङमार लामाले भने, ‘दुर्घटना हुन सक्ने डर उत्तिकै छ ।’
यसको समस्या समाधानका लागि हेलम्बु गाँउपालिका या सम्बद्ध निकायले पानीलाई पुल मुनिबाट पठाउने गरी ब्यवस्थापन गरिनु जरुरत रहेको स्थानीयको भनाई छ । गाउँपालिकाले भ्याकुम लगायर बालुवा खोतलेमात्र पनि पुल भन्दा तलबाट खोला बग्ने अवस्था रहेको गाउँवासी बताउँछन् ।